ချဉ်ပေါင်ပန်းအလှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ချဉ်ပေါင်ပန်းအလှ
Posted by weiwei on Oct 14, 2011 in Photography | 26 comments
ချဉ်ပေါင်ပင်မှာ ပန်းတွေပွင့်နေတာ လှလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ် … ရန်ကုန်မှာ တွေ့ရခဲတဲ့ ပန်းကလေးတွေ …
လှတယ်မဝေဝေ ရေ့။ ချဉ်ပေါင်ကြော် စားချင်လိုက်တာဗျာ။ဟဲဟဲ(^^)
ချဉ်ပေါင်အဖြူပင်ပါ။ သူက အကိုင်းထိုးလည်း ရှင်လွယ်တယ်။ မဝေရေ အခုတလော ရောဂါတက်နေတာ ချဉ်ပေါင်ဟင်း ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေး စားချင်တဲ့ရောဂါ။ အခု အပင်မြင်မှ ရောဂါ ပိုဆိုးပြီ။ မျက်လုံးထဲမှာ မဝေပြတဲ့ အပွင့်ကို မမြင်ဘူး အရွက်ကလေးတွေပဲ လိုက်ကြည့်မိနေပြီ။ ကံဆိုးချက် ပုံထဲက အရွက်တောင် ဟင်းတအိုးမရဘူး။
မှီ့ အတွက် ချဉ်ပေါင် ဟင်း အတုချက်နည်း လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်….
ခရမ်းချဉ်သီး နှစ်လုံးလောက် လက်နှင့် ဖြဲထည့်ပါ
ဟင်းနုနွယ် ကိုထည့်ပြီး မွေပါ
ငပိစိမ်းစားထည့်ပါ (မရှိလျင် ငံပြာရည် ၊ ငါးခြောက်)
ဟင်းချိုမှုန့် ဆား သင့်အောင်ထည့် ပါ
ဟင်းအိုးဆူလာလျှင် နံနံ ပင် သို့မဟုတ် ရှမ်းနံနံ (ကုလားနံနံ ဟုလည်းခေါ်ကြသည်)ထည့် ပါ
ချဉ်ပေါင်ဟင်းအတု တစ်ခွက်ရပါပြီ။ လုံးဝကိုတူတယ် မပြောပြရင် ချဉ်ပေါင်မဟုတ်မှန်း မသိဘူး။
ငါးခေါင်း ကြက်ရိုး စတာတွေလည်း ရောလို့ရတယ်နော်..
အဘဆွေရဲ့ ခရီရေးရှင်း တစ်ခုပါ ငတ်တော့ လုပ်စားကြည့်ရင်း သိသွားတာ..
ဟတ်ကို အကြီးကြီး ထိသွားပြီ ဘရားသား ဆွေ ရေ။
(အင်း ခေသူမဟုတ် တွေကြီးပဲနော်
ရွာတွင်မရှိမှတ်။) လို့ ကျနော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာ။
ဟင်းနုနွယ်တော့ မရှိဘူး ဗျာ၊ Spinach နဲ့ ကစ်မယ်။လာထား။
ငရုတ်သီးဆားထောင်း၊ ဝက်သားနီချက်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်း ။။
ကိုသစ်မင်း ရေ ဗိုက်ဆာသွားပြီ အသံကြားရတာနဲ့ လိုက်ဖက်အောင်တွဲတတ်ပါပေတယ်..
အဘဆွေရေ တခါက မှီရေးဖူးတယ်လေ “ဟင်းနုနွယ်ရောဂါ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေ။ အဘဆွေရဲ့ ခရီရေးရှင်းကို စမ်းချင်ပေမဲ့ ဟင်းနုနွယ်က မရှိ။ ကိုသက်မင်းကြီး ပြောတဲ့ စပိန်းနစ်ကလည်း မရ။ ကန်စွန်းရွက်တော့ ရလို့ အချဉ် ချက်စားတာပဲ ချဉ်ပေါင်နဲ့ မတူဘူး။ ဒီမှာ ခါးမို့( အချဉ်ရွက်) ခေါ်တဲ့ အရွက်တော့ ရတယ် ချက်စားကြည့်တော့ ကောင်းတော့ ကောင်းပေမဲ့ ချဉ်ပေါင်လို စူးစူးလေး စားချင်တာ။ ပါးစပ်က ဆာတာ မဟုတ်ပဲ စိတ်က ဆာနေတာမို့ ထင်ပါရဲ့ ချဉ်ပေါင် အရသာ မရမခြင်း ရောဂါတက်နေတော့တာ။ ပြန်ရောက်မှ ချက်၊ ပြုတ်၊ ကြော် အကုန်ကို ချက်စား ပြစ်ဦးမယ်။
မှီရေ မှတ်မီပီ ..ဘ မေ့သွားတာ…
ဟင်းနုနွယ် က spinach ပါပဲ ဘူးနဲ့ လာတာရှာကြည့် ပါဦး..spinach puree ဆိုပြီးလာတတ်တယ်……
အချဉ်စူးအောင်ဆားထည့် ရတာပါ ခရမ်းချဉ်လေး စွက်တော့ ပိုချဉ် ပါတယ်…သံပုရာ ရည် ထည့်လဲရတယ် .. ရခိုင်ငြုပ်ကြိတ် ကလေး ကိုသစ်မင်းပြောတဲ့ ငြုပ်သီးဆားထောင်းလေး နဲ့ဆိုရင် ကွိနေမှာ ပဲ…
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် အဘလဲ အာရဘစ် နိုင်ငံနေ ဘူးတယ် …စားစရာရှာရ ခက်တယ် …
ငါးခေါင်းစားချင်တာ ရှာ မ၇ဘူး ..နောက်မှ ငါးဈေးထဲက လူကိုအရက် တစ်လုံးပေးပြီး ပေါင်းတော့ မှ ငါးခေါင်းတွေ လွင့်မပစ်ပဲ ချန်ထားပေးတယ် အလကားကိုရတာ…
အဘနဲ့သိတဲ့ နီပေါလင်မယား အင်ဒီယန်းမိသားစု ကိုဝေပေး တော့ ကျေးဇူးအကြီးကြီးတွေ တင်ကြတာပေါ့..
မြင် မောင် သရမ်းတော့
တခြားလမ်းဘေးပန်းကလေးတွေ ရိုက်ထားသေးတယ် …
အခုတလော ရွာထဲမှာ ဓါတ်ပုံတင်တာ ခေတ်စားနေလို့ ခေတ်မှီအောင်လို့ …
အန်တီဝေ့ အသက်ကို ၄၀နဲ့ ၅၅ ကြားလို့ ခန့် မှန်းမိပါတယ်
နောက်ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောရင်
ကြွားစရာ တစ်ခု ရသွားပြီ အန်တီဝေ ရေ
မောင်ပေ့ မှာ ခေတ်ကို မျက်ခြေမပြတ်သော အန်တီချောချောလှလှ
တစ်ယောက်ရှိတယ် လို့ ကြွားမယ်နော်
မောင်ပေ … ဒီတစ်ခါ နဲနဲလွဲသွားပါတယ်ကွယ် …
အန်တီဝေလို့ ခေါ်နေပေမယ့် မောင်ပေထင်သလောက် အသက်မကြီးသေးပါဘူး …
မဝေရဲ့ ပန်းတွေကို လာကြည့်ရင်း .. ကိုပေ့မန်းထားတာ ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ် ။
မဝေက နုဖတ်ပြီး အရွယ်တင်တာ … ကိုပေမသိသေးဘူးကိုး :D
အန်တီဝေလို့ နောက်ပြောင်ခေါ်နေကြတာသာဖြစ်လို့ မောင်ပေ ဒီတခါ အများကြီးလွဲသွားပါတယ်ကွယ်။
မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့ စုံထောက်ကြီးရယ်။ :D
ချဉ်ပေါင်ပန်းဆိုလို့ အမေကြီး ရှိတုန်းကပြောခဲ့တာလေးအမှတ်ရတယ်…။ သူ့သားကိုပြောခဲ့တဲ့ စကားပါ…။ မိန်းကလေးတွေ လှတယ်ဆိုပြီးလိုက်ငမ်းမနေနဲ့ …။ ဘယ်ကောင်မလေးတော့ ချဉ်ပေါင်ပန်းတဲ့…။ ဘာလို့လဲ အမေကြီးရဲ့လို့ မေးကြည့်တော့ အဲဒိကောင်မလေးက ပညာမတတ်ဘူးတဲ့ ..။ အိမ်မှု ကိစ္စလည်းမနီုင်နင်းဘူးတဲ့ ..။ ရုပ်ကလေးကသာလှသာ သူ့မှာဘာမချင်းမှမရှိဘူးတဲ့…။ ပန်းထဲမှာလည်း ချဉ်ပေါင်ပွင့်တို့ ခ၀ဲပွင့်တို့က အပွင့်လေးကသာလှတာ ဘာရနံ့မှ မရှိဘူးဟဲ့ …။ သွားနမ်းကြည့်ပါလား နှာခေါင်းမယားရင်ကံကောင်း…….တဲ့…။ ဘာမှတော့ မဆိုင်ပါဘူး..။ ချဉ်ပေါင်ပန်းကိုမြင်တော့ သွားလေသူအမေကြီးကို သတိရသွားလို့……..
ဒီကမ္ဘာမြေ ပြင်ပေါ်တစ်လွှားဝယ်သူငါများတို့ရယ် … အလှနဲ့သစ္စာကိုကွယ်ဖွေရှာမောကြတယ် …. တစ်ကယ်မမောပန်းစေရန်ကိုရွယ် ပြော … ပြောပြမယ် … ကိုယ့်ဌာနေ၀န်းကျင်မှာကွယ်တစ်ကယ်ပင်အလှရှိတယ် ……….. ဒီသီချင်းလေးကအမှန်ပဲနော် ။ ချဉ်ပေါင်ပွင့်လေးတွေကိုတွေ့ဖြစ်ပေမယ့် ဒီလိုအလှတရားနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ မစဉ်းစားမိဘူး ။ ခုတော့လှလိုက်တာဗျာ ။ မထင်ထားဘူး ။ သဘာဝတရားကြီးက အသက်ဝင်ပန်းချီကားကြီးလိုပါပဲနော် ။
ခိုရီးယားက နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုပန်း(မှုဂွန်းဟွာ)နဲ့ တော်တော်တူတယ် ……..အဘဆွေတို့ ကိုသစ်မင်းတို့ မမမှီတို့ တစ်ပေ လောက် မြေကွတ်လပ်ကလေးမရှိဘူးလားဗျာ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းဘူး..:( ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုး ထားတယ်………
အန်တီဝေ နဲ့ အန်တီမမ ခင်ဗျား မောင်ပေရဲ့ ထောင်ချောက်ကိုတခါထဲရောက်သွားတာပဲ အမှန်လိုချင်လို့ အမှားပြောတာထင်ပါတယ် … စုံထောက်ကြီးကို ရှော့မတွက်ပါနဲ့ဗျာ …..:)
ချဉ်ပေါင်ပန်းလေးတွေက လှလိုက်တာနော် …မဝေရဲ့ ရိုက်ချက်ကလဲ ကောင်းပါတယ်
ချဉ်ပေါင်ဆိုလို့ ရေသည်မိန်းမနဲ့ရေသည်ယောကျာင်္းကိုပြေးမြင်မိလိုက်တာပဲ ပဆိုးကအဖာတစ်ရာပေမယ့် ချဉ်ပေါင်ဟင်းကိုတော့ ဘာနဲ့မှမလှဲနိုင်ပါကြောင်း
ကိုလေပွားရေ၊ အန်တီဝေအသက်က အဲသလောက် ဟုတ်သေးပါဘူးကွယ်။ ၃၉ နဲ့ ၄၄ကြားလို့ ထပ်ပြောကြည့်လိုက်။ နောက်တနေ့ ဂျီတော့ခ်ကနေ ဗေဒင်တွက်ခိုင်းလိမ့်မယ်။ ကျနော်မှန်းလိုက်တာ ကွက်တိဖြစ်သွားလို့ ဂျီတော့ခ်တောင် မတက်ရဲတော့ဘူး။ တွေ့ရင် ရှေ့ဖြစ်ဟောခိုင်းလွန်းလို့။
ရွာထဲဝင်ရင် မှတ်ပုံတင်ပြရမယ်နဲ့တူတယ် …
ကိုကြောင်ကြီးအသက် ၃၅ နဲ့ ၄၀ ကြား ဖြစ်မယ်လို့ မှန်းကြည့်မိပါတယ် …
ချဉ်ပေါင်ပန်းကနေ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဦးလန်ဘားက အမှုလုပ်လိုက်ပါလိမ့် …
လ၀ကတွေနဲ့ တွေ့နေတယ် ..
ချဉ်ပေါင်ပင်ဆိုလို့ ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာရဲ့ကဗျာတွေကိုသတိရတယ် ထန်းသမား၊ လယ်သမား ၊ လှေသမားတွေ ဟင်းအိုးထဲမှာ ငါးပိတစ်ခဲ ချဉ်ပေါင်မွှေးမွှေးနဲ့
“ထမင်းကပူ ဟင်းကပူ ရှူရှူသာ ရှမ်းငရုတ်ကယ်နှင့်လေး ” ဆိုပြီး လွေးလိုက်ချင်သဗျာ သွားရည်တောင်ကျတယ် ရွှတ် ရွှတ်……